Relax kwiziko lembali - I-Airbnb
Relax kwiziko lembali
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguOrnella
Igumbi elizimeleyo leen-suite elinegadi entle, kwiziko lembali lasePietrasanta. Igumbi lixhotyiswe ngekhitshi elincinci kunye netafile yokutyela. Igadi iza nezitulo zomgangatho wokuphumla ngokupheleleyo. Ukupaka kuyafumaneka simahla kwisiza. Ulwandle lukumgama oziikhilomitha ezi-3 kuphela!
Indlu yesitudiyo, kanye embindini wePietrasanta, iziimitha ezisisikweri ezingama-23 kwaye ibandakanya ibhedi ephindwe kabini (140cm / 55in ububanzi), igumbi lokuhlambela elineshawari encinci, itafile yokutyela kunye nekhitshi encinci. Yonke yenziwe ngezinto eziphathekayo eco-friendly. Ukuhlala ixesha elide, nditshintsha iitawuli rhoqo emva kweentsuku ezine kunye nokulala ngeveki. Ukucoca yonke imihla kuxhomekeke kwiindwendwe.
Isitiya sahlula istudiyo kwisakhiwo esikhulu kwaye siyafumaneka ukuze sisetyenziswe ngokukhethekileyo ziindwendwe zethu. Iza kunye netafile yokutyela kunye nezitulo zomgangatho, ukufumana amava okuphumla ngokupheleleyo.
Ulwandle lungaphantsi kweekhilomitha ezi-4 kwaye unokufikelelwa lula ngebhayisikili, isithuthi sikawonke-wonke okanye imoto (sinendawo yokupaka yasimahla). Ukuba ungaphezulu ezintabeni, indlu ilungile ezinyaweni zeenduli ezijikeleze iPietrasanta.
Ukuba ufuna iingcebiso, ndiyavuya ukukunceda kwaye ndicebise ukuba wenze ntoni kwaye utye phi - ngesiNgesi kunye nesiFrentshi.
Ukuba kuxelwe kwangaphambili, iiyure zokungena zingalungiselelwa ukuze zihambelane neemfuno zakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Pietrasanta